MCU – ZEUS Myanmar
Moon Knight Teaser Breakdown
No Comments on Moon Knight Teaser Breakdown
တနေ့က Disney+ ရဲ့ DisneyPlusDay မှာကြေညာသွားတဲ့ moon knight ရဲ့ Teaser Trailer လေးကို Breakdown လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး teaser အကြောင်းမပြောခင် Moon Knight ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ အရင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် ။
Moon Knight ရဲ့ နာမည်အရင်းက Marc Spector ဖြစ်ပြီး CIA agent ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ Moon Knight ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာကတော့ Marc Spector ဟာ CIA အလုပ်ကထွက်ပြီး နိုင်ငံလှည့် ကြေးစားလုပ်နေတုန်း Raul Bushman ဆိုသူနဲ့တွေ့ကာ Egypt က ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့ အုတ်ဂူကို တူးဖော်ရှာဖွေဖို့ mission ပေးခံခဲ့ရပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် Raul Bushman ဟာ အဖွဲ့ကို သစ္စာဖောက်ကာ သုတေသနပညာရှင် Peter Alraune ကိုလည်း သတ်ပစ်လိုက်တဲ့အပြင် Marc ကိုလည်း မသေရုံတမယ် အုတ်ဂူထဲမှာထားထားခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ချိန်မှာပဲ Marc ဟာ သူမျောနေတုန်း အီဂျစ်လဘုရား Khonshu နဲ့တွေ့ဆုံပြီး အပေးအယူတစ်ခုပြုလုပ်ကာ Moon Knight ဖြစ်လာပါတော့တယ် ။
ဒီဘဲကို တော်တော်များများက Marvel Batman လို့ ခေါ်ကြပေမယ့် origin ရော ဇာတ်ကောင်စရိုက်ရောအပြင် abilities တွေကအစ အကွာကြီးပါ ။ Moon Knight ရဲ့ abilities တွေအားဖြင့်တော့ Healing factor ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသလို Khonshu ရဲ့ အစွမ်းနဲ့လည်း သေသွားရင်တောင် အသက်ပြန်ရှင်
လာနိုင်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ Moon knight ဟာ လရောင်အောက်ညဖက်မှာဆို ပိုကြမ်းပြီး Moon knight ဟာ
Taskmaster တိုက်ကွက် copy ကူးမရတဲ့ လူတွေထဲက တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Multiple Personalies Concept
Teaser ရဲ့ ပထမဆုံး scene မှာတော့ Marc Spector ဟာ အိပ်မက်တစ်ခုကနေ နိုးထလာတဲ့ပုံပေါ်ပြီး background voice အနေနဲ့ ” ငါ နိုးထနေရတာနဲ့ အိပ်မက်မက်နေတာက ဘာကွာလဲဆိုတာတောင် မပြောနိုင်တော့ဘူး ‘ လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
ဒီနောက် သူ မှန်ထဲကို ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန် သူ့ရဲ့ reflection တွေက နှစ်ခုကွဲထွက်နေတဲ့အပြင် သူတစ်ဖက်ကို လမ်းလျှောက်သွားတဲ့တိုင်အောင် အဲ့ reflection တွေက သူ့ကို လိုက်ကြည့်နေတုန်းပါ ။
ဒါတွေက ဘာကို ရည်ညွန်းသလဲဆို moon knight ရဲ့အထင်ကရ အချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DID စိတ်ရောဂါကို ညွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ DID ဆိုတာကတော့ လူတစ်ကိုယ်ထဲနဲ့ စိတ်တွေအများကြီးကွဲထွက်နေတဲ့ mental illness တစ်မျိူးဖြစ်ပြီး ဒီ show ဟာလည်း moon knight ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကို focus လုပ်သွားဖို့ များပါတယ် ။
Moon knight နေရာသရုပ်ဆောင်တဲ့ Oscar Isaac ကတော့ Moon knight show ဟာ MCU ထဲမှာ တော်တော်လေး dark and wild အဖြစ်ဆုံး တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ ပြောထားပြီး Moon knight ကို ရိုက်ကူးရတာကလည်း သူ့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ အခက်ခဲဆုံးနဲ့ အကြမ်းတမ်းဆုံး လို့ပါ ပြောထားပါသေးတယ် ။
Teaser မှာ ပြသွားတာတွေအရတော့ moon knight ဟာ DC ဆန်ပြီး deep and dark မယ့် ပုံစံမျိူး သွားဖို့ရှိနေပါတယ် ။ အဲ့ပြင် black swan နဲ့ shutter island တို့လို psychological thriller vibes မျိူးလည်း ရပါသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် marvel ကဆိုတော့ pg-13 ပါပဲ ။ :3
အဲ့နောက် marc ဟာ ဗီရိုမှန်ကို ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း နောက်ထပ်ကွဲထွက်နေတဲ့ personalities တွေကို ထပ်မြင်တွေ့ရပြန်ပါတယ် ။ Moon knight တစ်နည်းအားဖြင့် marc မှာ personality တွေ ဆယ်ခုကျော်ရှိပေမယ့် ဒီ series အတွင်း ဖော်ပြသွားမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ရသလို marc spector ရဲ့ အထင်ရှားဆုံး persona5ခုရှိပါတယ် ။
ပထမကတော့ ကြေးစား CIA agent ဟောင်း Marc Spector သူကိုယ်တိုင်ပါ ။ နောက်တစ်ယောက်က Jake Lockley အမည်ရ taxi ကားမောင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်နေလဲ စသဖြင့် မှုခင်းသတင်းတွေကို ရယူပါတယ် ။ Steven Grant ဆိုသူကတော့ Tony Stark လို billionarie တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသလို smart ကျကျဝတ်စားတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။
နောက်ထပ် persona တစ်ခုကတော့ သူ့ကို အစွမ်းပေးခဲ့တဲ့ Khonshu ဖြစ်ပြီး marc ရဲ့ personalities တွေတိုင်းကို အကြံဉာဏ်တွေပေးတဲ့အပြင် မကောင်းတဲ့အရာ တစ်ခုခုကို လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းလေ့ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။ နောက်ဆုံးကတော့ အဓိက ဇာတ်ကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Anti-hero ကြီး Moon Knight ပါပဲ ။
ကိုယ့်ရဲ့ မသိစိတ်ကနေ ထွက်ပြေးနေရတဲ့ Marc Spector
နောက် scene တစ်ခုမှာ marc ဟာ အဖြူရောင်လက်အိတ်ကြီးဝတ်ပြီး ကားပြတင်းပေါက်ကို လှမ်းထိလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။ အနောက်မှာရှိနေတဲ့ လူတွေကလည်း marc ဒီလိုဖြစ်သွားတာကို ကြောက်လန့်နေကြတာကြောင့် ဒါဟာ marc တစ်ယောက် moon knight အဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့ သူ့ရဲ့ အသိစိတ်နဲ့ မသိစိတ်ကြား ရုန်းကန်နေရပုံပေါ်ပါတယ် ။ အပေါ်မှာ marc ပြောခဲ့တဲ့ စကားအရ marc ဟာ သူ moon knight ဖြစ်သွားတဲ့အချိန် လုပ်ခဲ့သမျှကို အိပ်မက်လို့ ထင်မှတ်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ ကွဲထွက်နေတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ သူ့သိစိတ်ကြား အိပ်မက်လား reality လားမခွဲခြားနိုင်ဖြစ်နေတာပါ ။
အဲ့နောက် ပြတိုက်တစ်ခုထဲမှာ အသံမထွက်မိသွားအောင် ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားပြီး တစ်ခုခုလက်ထဲက ပုန်းနေတာကို မြင်ရပါတယ်။ ပုံစံကလည်း တော်တော်ကြောက်နေပုံပေါ်တော့ moon knight အဖြစ် သောင်းကျန်းတုန်းက သောင်းကျန်းထားပြီး marc ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ villain လက်ထဲက ပုန်းရှောင်နေရတာဖြစ်နိုင်သလို သူ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ အသံတွေကနေ ထွက်ပြေးနေရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက် storage ဂိုထောင်တစ်ခုထဲမှာ အိတ်ကြီးတစ်အိတ်ကိုင်ထားတဲ့ marc ကို မြင်ရပြီး သူ ဘာကြောင့် ဒီရောက်နေသလဲဆိုတာကို စိတ်ရှုပ်နေတဲ့ပုံနဲ့တူပါတယ် ။ ကျွန်တော့်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ အဲ့အိတ်က moon knight ရဲ့ costume နဲ့ လက်နက်တွေ ထည့်ထားတဲ့အိတ်ဖြစ်ပြီး marc ဟာ သူအိပ်မက်တွေထဲ လုပ်မိလိုက်တဲ့ အရာတွေနောက်လိုက်ရင်း ဂိုထောင်ထဲ ရောက်သွားပုံပါပဲ။
ဒီနောက် သူ့ကို တစ်ခုခုက လိုက်နေလို့ အိတ်ကြီးပိုက်ကာ ဂိုထောင်ထဲမှာ သည်းကြီးမဲကြီး ထွက်ပြေးနေပုံနဲ့ တူသလိုရှိပါတယ် ။ ဒါကလည်း အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒီ series ရဲ့ main villain က moon knight ကို လိုက်နေတာဖြစ်နိုင်သလို သူ့ရဲ့ တခြား personalities တွေဆီကနေ ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ထွက်ပြေးနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Trailer ရဲ့ နောက်တစ် scene မှာလည်း marc ဟာ သူကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ဘဲ လူတွေအများကြီးကို တိုက်ခိုက်လိုက်နိုင်တာတွေ့ရပြီး သူ့ကိုယ်သူတောင် အံ့သြနေပါတယ် ။ သူ့ဘေးက လူတွေကတော့ marc ရဲ့ ရက်စက်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ကြောက်နေကြပါတယ်။
Hero မဆန်တဲ့ Moon Knight
ဒီနောက် ‘who’s in your head devours you’ ဆိုပြီး တခြားသူတစ်ယောက်က ပြောလိုက်တဲ့အသံကြားလိုက်ရပြီး moon knight ဟာ တစ်နေရာမှာ လူတစ်ယောက်ကို သေလောက်အောင် ရိုက်နှက်နေပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ ပြောလိုက်တဲ့ နောက်ကွယ်က အသံကတော့ marc ရဲ့ persona တစ်ခုသို့မဟုတ် show ရဲ့ တခြား character တစ်ခုဖြစ်လောက်မှာပါ ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့စိတ်ထဲက သူဖန်တီးထားတဲ့ khonshu လို့ထင်ပါတယ်။
ရိုက်နှက်တဲ့ scene နဲ့ ပတ်သက်ပြီးက moon knight ကတော့ anti-hero ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ comic ထဲမှာ ဒီထက်ပိုကြမ်းတာတွေတောင်လုပ်ဖူးပါတယ် ။ လူတွေကို နှိပ်စက်တဲ့နေရာမှာလည်း ဆရာတစ်ဆူပါပဲ ။ လူတွေကို တစ်ချက်ထဲနဲ့ သတ်တာမဟုတ်ဘဲ စိမ်ပြေနှပြေနှိပ်စက်ညှဥ်းဆဲပြီးမှ သွေးအေးအေးနဲ့ သတ်တာပါ ။ သတ်ပြီးရင်လည်း လူတွေရဲ့ နဖူးမှာ လခြမ်းပုံအမှတ်အသားလေး ထွင်းပြီး ချန်ထားလေ့ရှိပါတယ် ။ moon knight ဟာ marvel ရဲ့ dark ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် သူ့ဇာတ်လမ်းကတော့ mcu နဲ့တောင်မတူဘဲ dark ဖြစ်နေမှာပါပဲ ။ ဒါမှသာ Moon knight ရဲ့ theme ပေါ်လွင်မှာပါ ။
Moon Knight ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ သူ တံတားပေါ်မှာ ပြေးသွားပြီး တိုက်ပေါ်က ခုန်လိုက်တဲ့ scene တွေ ရဲ့background မှာ ရေထဲက လရဲ့ Reflection တွေ ကောင်းကင်ပေါ်က လခြမ်း background တွေလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Main villain tease လုပ်ခြင်း
ဒီနောက် စားသောက်ဆိုင်ပေါက်ကွဲသွားတာကို မြင်ရပြီး moon knight ရဲ့ ဝတ်စုံကိုလည်း အနီးကပ်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ် ။ moon knight ကတော့ သူ့အရှုပ်ထုပ်အပြင် တခြားအမှုတစ်ခုကိုပါ ရှင်းရတော့မယ့်ပုံပါပဲ ။ trailer ရဲ့ အဆုံးသတ်မှာလည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အော်သံနဲ့အတူ ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်က ဂူတစ်ဂူထဲ ဆွဲသွင်းသွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် ဒါဟာ series ရဲ့ main villain ကို tease တာဖြစ်ပါတယ်။
Main villain နေရာ ကိုတော့ နာမည်ကျော်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ethan hawke က သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဘယ် role ဖြစ်မလဲကတော့ မကြေညာသေးပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် moon knight လို လူမျိူးနဲ့ ယှဥ်ဖို့ကတော့ နှယ်နှယ်ရရ ဇာတ့ကောင်ထဲက မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ ထင်မိပါတယ် ။ သဘာဝလွန်အစွမ်းရထားတဲ့ villain တစ်ကောင်ကောင်ဖြစ်လောက်မှာပါ ။ moon knight ဆိုတာကလည်း comic ထဲမှာ Supernatural အရာတွေကို အမဲလိုက်ခြင်းအားဖြင့် လူသိများပါတယ် ။ မကြာခင် disney + မှာလာဖို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ werewolf by the night နဲ့တောင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
Moon Knight ရဲ့ Look ကို Teaser ထဲဘာမှမပြသွားပေမယ့် အောက်ပါပုံကတော့ Teaser မထွက်ခင်ထဲက Leaked ထားတဲ့ Moon Knight ရဲ့ Suit ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အစကတော့ မသေချာသေးပေမယ့် Teaser ထဲက Scene နဲ့ တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Background ကအစတူနေတာတွေ့ရပါတယ်။
တချို့ကတော့ ထို look ကိုသိပ်သဘောမကျပေမယ့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Badass ဖြစ်ပြီး သွားထားတာနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ MCU ရဲ့ အထာကလဲ Character တွေကို Suit Upgrade လုပ်တာမျိုးတွေများတာဆိုတော့ နောက်ထပ်ပုံစံ ၁ မျိုးနဲ့လဲ ထပ်မြင်ရနိုင်သေးတာမို့ စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။
အဆုံးထိဖတ်ပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Moon knight teaser နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Info နဲ့ breakdown လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Series ကတော့ release date အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် 2022 အတွင်း ထွက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(Zeusmyanmar မှ Content များကိုပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခွင့်မပြုပါ။)
Anime ဘက်ကိုချဲ့ထွင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ Marvel Studios
No Comments on Anime ဘက်ကိုချဲ့ထွင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ Marvel Studios
Disney+ ဟာစတင်တည်ထောင်ကတည်းက movie or series တွေကိုမျိုးစုံချပြဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီး ယခုဆိုရင်လဲ တစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ အခု ၁ ခါမှာလဲ Marvel Studios ဘက်ကနေ 2D animation ဖြစ်တဲ့ anime ဘက်ကို ခြေဆန့်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိနေပါတယ်။
Star Wars: Visions series မှာဆိုရင်လည်း anime anthology series ၁ ခု ဖြစ်ပြီး episode တစ်ခုစီကို studio တစ်ခု‌ဆီကနေ တာဝန်ယူဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Marvel ရဲ့ What If? animation series မှာဆိုရင်လဲ ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် Marvel ဟာသူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောအားနည်းရာဖြစ်တဲ့ animation ဘက်ကို ထပ်ဖြည့်ဦးမှာပါပဲ။ What If? နဲ့တင်အတော်လေးအားရနေပါပြီ။
The Comic Circus ရဲ့တင်ပြချက်အရ Marvel ဟာ 2D animation နဲ့ high-end anime 2DFX style အကြောင်းနားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေကိုစုဆောင်းနေပြီး ဒါဟာနောက်လာမယ့် anime project တွေအတွက်စီစဉ်နေတာကလွဲလို့ကျန်တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါဆိုရင် ဘယ်ဇာတ်လမ်းတွေကို anime အဖြစ်မြင်ရမှာလဲ?
Marvel ဟာလောလောဆယ် Multiverse ဘက်ကို အကြီးအကျယ်ဖွင့်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုက်တဲ့ timeline ကဟာကိုဆွဲထည့်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာ Avengers အဖွဲ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ timeline မျိုး
အနီးစပ်ဆုံးကတော့ Big Hero6ကို adaptation လုပ်လောက်မှာပါ။
Japan နိုင်ငံမှာပဲအခြေစိုက်ထားတဲ့ story တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် live-action ထက် anime အနေနဲ့ဆိုပိုအဆင်ပြေနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Marvel anime တွေကိုကြည့်ရမယ်လို့တစ်ခါမှမတွေးဘူးရင် အခုချိန်‌မှာတွေးလို့ရနေပါပြီ။